Olaantoota fi Jalaantoota Gara Garaa Hiikuun - LibreOffice Help
Galmee kee keessatti olaantoota fi jalaantoota gara garaa fuulaa gara biraa irratti fayyadamuu kan dandeessu,hamma fuulotni akkaataalee fuulaa gara biraa fayyadama yoo ta'e dha. LibreOffice'n akkaataalee fuulaa duraan dursuun hiikaman kenna, kan akka Fuulaa jalqabaa, Fuulaa bitaa fi Fuulaa mirgaa ykn akkaataalee amala fuulaa uumuu dandeessa.
Irraantoo akkaataa fuula kan moggoota fuula keessaa fi alaa adda addaa qabutti ida'uu yoo barbaadde ittidabalte teessuuma fuula fuuldoyyoome fayyadamuu dandeessa. Filannoo kana akkaataa fuulaatti dalageessuuf, Dhangii - Fuula fili, caancala Fuula cuqaasitii, naannoo Qindaa'inoota teessumaa keessaatii, “fuuldoyyoome” saanduqa Teessuma fuula keessaa fili.
Fakkeenyaaf, galmee kee keessatti olaantota gara garaa kan fulootaa qaraa fi guutuuf qaban hiikuuf akkkaataalee fuulaa fayyyadamuu dandeessa.
Galmee barruu haaraa bani.
Dhangi'i - Akkaataalee fi Dhangeessuun fili fi sajooAkkaataalee Fuulaa kan foddaa akkaataalee fi dhangeessuun keessa cuqaaasi.
Tarree akkaataalee fuulaa keessaa "Fuulaa Mirgaa" jedhu keesssa mirga cuqaasi fi Fooyyeessi fili
Qaaqa Haalataalee Fuulaa keessaa, caancalee Irraantoo cuqaasi.
Irraantoo irraa filadhu akkasumas caancalee Qindeessaa cuqaasi.
Sanduuqa Akkaataa itti aanu keessaa, "Fuula Bitaa" fili.
Foddaa Akkaataalee fi Dhangeessuun keessatti, tarree akkaataalee fuulaa jedhu keessaa "Fuula Bitaa" mirga cuqaasi fi Fooyyeessi fili.
Sanduuqa Haalata itti aanu keessaa, "Fuulaa Mirgaa" fili.
Akkaataa gara fuula ammeetti fayyadamuuf tarree akkataalee fuulaa keessaa "Fuula Mirgaa" lamcuqaasi.
Akkaataa fuula bitaaf olaantoo keessa barruu ykn saxaatoo galchi. Erga fulli itti aanuu galmee kee keessatti dabalame booda, akkaataa fuula mirgaaf olaantoo keessa barruu ykn saxaatoo galchi
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.1/Writer/Defining_Different_Headers_and_Footers/om&oldid=698152"